Aqalka Wakiillada Baarlamaanka Mareykanka Oo Laga Mamnuucay Qof Aan Afka Xidhnayn | Kaafi News
Aqalka Wakiillada Baarlamaanka Mareykanka Oo Laga Mamnuucay Qof Aan Afka Xidhnayn
Aqalka wakiillada baarlamaanka Mareykanka ayaa ku amray dhammaan xildhibaannada iyo shaqaalaha kale ee aqalkaasi in ay xirtaan af-xirka looga gaashaanto fayraska Korona, xilli dhimashada uu sababay fayraskaasi ee dalkaasi ay ka sare martay 150,000.
Guddoomiyaha aqalkaasi Nancy Pelosi ayaa u digtay xildhibaannada, iyada oo sheegtay in cid kastaa oo ku xadgudubto awaamiirtaasi tallaabo laga qaadi doono.
Go’aankaasi ayay qaadatay ka dib markii xildhibaan Louie Gohmert oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga laga helay cudurkaasi.
Xildhibaankaasi ayaa dhismaha baarlamaanka dhawr jeer lagu arkay isaga oo aan xirnayn af-xir ama aan af-saabnayn. Waxa ay ahayd in maalintii arbacada ahayd uu safar u raaco madaxweyne Trump, waana maalinta laga helay cudurka.
Nancy Pelosi ayaa sheegtay in xildhibaannada loo ogol yahay in ay bixiyaan af-saabka marka ay khudbad ka jeedinayaan gudaha baarlamaanka ama ay hadlayaan.
Shabakadda GovTrack.us ayaa sheegtay in toban xildhibaan oo ka tirsan Koongareeska dalkaasi laga helay fayraska Korona.
Xildhibaan Gohmert oo 66 sano jir ah ayaa cudurkaasi laga helay ka dib markii lagu sameeyay baaritaan mar kastaa lagu sameeyo siyaasinta safarka u raacaya madaxweye Trump.
Gohmert oo wareysi siiyay qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in af-saabiddu ayba keeni karto cudurkaasi.
Xildhibaankan ayaa ka mid ahaa tiro xildhibaanno ah oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo marar badan lagu arkayay gudaha baarlamaanka iyaga oo af-saabnayn.
In kastoo talooyin iska soo horjeeda laga soo saarayay wax tarka af-saabidda, haddaba khubarada caafimaadka waxay isku waafqsan yihiin in wax weyn uu ka tarayo in qofku uu iska ilaaliyo fayraska Korona.